Tadiom-pitiavana | 4
Tapakevitra i Rado fa hanome izay tadiavin'ity vehivavy sendra nandalo tamin'ny fotoana tsy nampoiziny teo amin'ny fiainany ity. Narosony hidina lalindalina tany anaty atin'akanjon'i Malala tany ny tanany ankavia ary ny tanany ankavanana indray kosa dia nitohy nanafosafo moramora ny lohan'ity farany. Niverina nikipy indray ny mason'i Malala toa nankafy ny safosafon'izato olon-tsy fantany fa nahasarika azy tsotra izao fotsiny. Tiany ny mahatsapa ny fahasahian'ilay tovolahy mamakivaky tsy ampihambahambana ny tenany iray manontolo. Zipo fotsy malefaka vita amin'ny lamba landy ireny moa no teny ankoditr'i Malala. Elastika no nitazona azy teo ambalahany ka tsy nananosarotra tamin'ny ratsan-tananan'i Rado ny nitsofoka tao anatiny. Tsy ela akory dia tonga teo amoron'ilay dongona teo anelanelam-pen'i Malala izy. Somary niahotra kely aloha i Rado sady nijery ny manodidina azy. Tsaroany tampoka mantsy fa tsy irery akory izy roa. Efa voaentanin'ny filana anefa i Rado ka tsy poa toy izay dia efa niroso moramora niditra tao anatin'ilay silipon'i Malala ny rantsan-tanany vitsivitsy. Somary taitra kely ny anao vavy sady ohatran'ny hoe ndeha hanakatona ny feny vao naheno ny safosafon'i Rado efa tafapaka hatreo amin'ny tampon'ny zohim-pahafinaretany. Iny Malala mbola varimbariana iny no nampidinin'i Rado hiditra lalindalina ny fanondrony sy ny fanondro adalany. Niontana kely ny fon'ny tovolahy nahatsapa fa hay efa tena hotsaky ny rano tanteraka ny fivavian'i Malala. Navezivezin'i Rado moramora tamin'izay ary ny rantsantanany anankiroa nony avy eo sady somary nataony niaka-nidina rehefa avy nampandaloviny kely teo amin'ilay kitsom-pahafinaretan'i Malala izay tena nihijitra aoka izany. Tsapan'i Malala fa miha manenika ny tenany ny hasambarana. Novelariny kely ny feny hisabaka tsara mba ahafahan'ny tanan'i Rado nanafosafo tsara ny fivaviany efa tena lonaka tanteraka. Toa tsy misy zavatra tian'i Malala ho tadidiana intsony tamin'izay fotoana izay afatsy ny fahafinaretana tsapany miha mananika tsikelikely ny tenany iray manontolo. Henony fa nihamafy ny fisefony sady toa niha nafana ny fofon'aina nivoaka tamin'ny vava orony. Niezaka naina moramora izy mba tsy hanaitra ny manodidina na dia toa ila tsy ho voafehiny intsony aza izato fahasambarana mananika ny vatany. Nampidirin'i Rado lalina tany anatin'i Malala tany ny rantsantanany iray ka tsapany fa toa somary mikentron-tarehy izay i Malala isaky ny voakasiny ilay faritra misy nofo kely mihantona ao anatin'ny fivavian'i Malala ao. Noverenany nokasihina indray ilay faritra ka somary nimaona tsirom-pahafinaretana izay ny anao vavy. Teo i Rado vao tena nahatsiaro fa mety tsy hahatana ny haka fafiny ampahanginana ao intsony i Malala raha mitohy izao ataony azy izao ka dia novonjeny notapenana haingana tamin'ny tanany ilany ny vavan'i Malala mba ty hamoaka feo. Toa vao maika nampihodina ny bokotra fampandehanana tao anatin'i Malala anefa izany fihetsiky Rado toa manakana azy izany ka vao maika nitankisina tamin'ny toerana natoriany teo ny anao vavy sady toa nanenjika ireo rantsan-tanana niditra sy nivoaka ary namakivaky ny halavan'ny zohim-pahafinaretany. Natahotra tampoka i Rado nanoloana ny zava nisy fa toa miha tsy tompon'ny tenany hatrany ilay vehivavy omeny fahafinarentana. Tamin'izay fotoana izay indrindra no nisy vehivavy lehibe iray nipetraka tsy dia lavidavitra kely teo alohan'i Rado nizotra nanatona ny lalantsara hoan'ny amin'ny toerana fivoahana izay tany aoriana. Nahenan'i Rado avy hatrany ny fihetsin'ireo rantsantanany havia mbola tavela teo anelakelam-pen'i Malala sady nikoropaka haingana ny tanany ankavanana nanarona tsara ny lamba nirakofan'i Malala izay efa ila ho latsaka tamin'ny tany. Nihiratra tampoka i Malala sady niandradra nijery an'i Rado toa manontany hoe fa maninona no ajanonao. Tsy namaly anefa i Rado fa ny tanany ankavia no nosintoniny moramora hiala tao anaty silipon'i Malala. Niondrika moramora i Rado nony avy eo dia nibitsibitsika tamin'i Malala izay niondana teo amin'ny feny hoe:
- "misy olona!!".
Kivy be ny anao vavy fa tapaka tampoka ilay hasambarana efa henony ila handifotra azy teo.
- " Aoka izay!" hoy i Rado niverina nibitsibitsika teo ampoto-tsofiny indray " fa rehefa tonga any Tana tohizana". Tsy namaly anefa i Malala fa ny masony no naverina nakipy. Toa sorena tampoka izany no fahatsapany ny tenany. Toa nandalo tamin'ny sofiny fotsiny ilay tenin'i Rado tamin'ny teo ny amin'ny hanohizana ny fiarahan'izy ireo rehefa tonga any Antananarivo. Niverina tao antsainy tampoka ny endriky Ratrema tonga mitsena azy eo Ivato afaka ora vitsivitsy.
- " izay izany " hoy izy tany antsainy tany. I Rado moa tamin'io fotoana io tsy niteny fa toa nanaraka ambokony fotsiny izay tian'ity vehivavy atao.
Samy varimbariana tamin'izay noheritrerentina avy teo izy roa ary dia resin-tory ihany no niafarany. Ny feo manga somary mikasokasoka an'ilay hotesy nilaza fa miditra ny moron-tsiraky Madagasikara izy ireo no nanaitra ireto olon-droa toa samy tsy nahazo izay tena notadiaviny. Ny ankamaroan'ny mpandeha moa tamin'io efa somary taitra avokoa ary efa avy nisakafo maraina aza. Niharina moramora I Malala nony kelikely sady nijery ireo zanany mbola sondrian-tory no nanontany an'i Rado izay efa tafafoha mialoha.
- " Tonga ve?" hoy izy
- " Efa kely sisa " hoy i Rado nitsiky nijery azy. " Natory tsara?" sady ohatran'ny nanao fijery hafahafa izay i Rado tamin'i Malala toa te hampita hafatra mihoatra lavitra noho izay naloaky ny vavany.
- " Enao mampijaly!" hoy i Malala tamin'ny feo miangoty miaro henatra sady ohatran'ny nahankiny moramora teo amin'ny soroky Rado ny lohany. " Menatra anao aho" hoy izy nony avy eo nanohy. " Vao omaly ve isika no nifakahalala dia ireny no zava-bitan-tsika?" sady nangala-maso tany amin'ity tovolahy teo akaikiny izy.
Tsy namaly avy hatrany aloha i Rado fa toa namadibadika ny voambolana tao amin'ny tahiriny.
- " izaho no tena menatra anao" hoy i Rado nony avy eo. Mbola tsy nanao zavatra toa ireny mihitsy aho. ... efa mba nonofinofisiko ihany anefa aloha ilay hoe hiaraka amin'ny olona tsy fantatro amin'ny fotoana tsy ampoiziko ety ambony fiara manidina fa tsy noheveriko ho tanteraka. Dia ahoana izany izao ny tohiny? " sady nijery tany amin'i Malala ilay tovolahy.
- " Tsy haiko!" hoy i Malala. " Za io hitanao manan-janaka roa be izao io, ny vadiko rahateo koa hoavy hitsena anay ao Ivato rehefa avy eo, de ..." sady niahotra kely izy aloha.
- " Izaho koa aloha efa manambady saingy tsy mbola mananjanaka eh" hoy i Rado toa ila tsy hahaloam-peo. Tsy haiko anefa ry Malala fa ohatran'ny misy zavatra tsapako aminao izany ah"
Teo vao tonga saina i Malala naheno ity tenin'i Rado farany ity.
- " Rado ah!" hoy izy nony avy eo. " Tsy manome tsiny anao aho nefa tsy te handratra ny fonao na koa hoe hanimba ny tokantranonao ka aleo ataontsika ho toy ny tsy nisy ihany ireny zavatra niainantsika teo ireny. Sa tsy mety aminao izay?"
- " Eny e, mety misy mahamarina ny teninao fa aleo ary ataoko hoe nanonofy fotsiny aho tamin'izay niainako sy tsapako rehetra teo. Tiako ho fantatrao fotsiny anefa fa somary diso fanantenana kely aho fa mbola nanantena be mantsy aho hoe mbola hitohy ilay izy rehefa tonga aty Dago isika"
- " Na izaho koa aza anie diso fanantenana saingy aleo samy manamboatra saina isika". Toa nisy fahanginana kely aloha teo amin'izy roa izao vao nanohy moramora i Malala hoe:
- " Tsy fantatra koa anie izay haloaky ny hoavy ". Toa te hanamboatra ny sain'ity tovolahy lasa saina tsy fantatra izany ny anao vavy..
- " Mety mbola afaka mihaona aminao ve aho rehefa tonga isika?" hoy i Rado nony avy eo.
- " Ahoana moa no tsy ho afaka mihaona" hoy i Malala "saingy tsy afaka mampanantena ny hitohizan'ny fiarahantsika aho. Tsy fantatro hoe inona marina no tena miandry ahy aty Dago" sady toa niverina tao antsainy tampoka ny resaka nifanaovan'izy sy Ratrema vadiny faram-parany tamin'ny telefona.
- "Firy ny laharana mety ahazoana miantso anao ry Malala?" hoy i Rado toa nisisika izany nony avy eo.
- " Sarotra be ilay hihantsonao ahy ry Rado fa hanahirana ahy amin'ny vadiko kah. Raha manana adiresy mailaka ianao dia aleo aho any no manoratra dia ho hitantsika eo, sa ahoana?"
Na dia tsy nahafapo loatra an'i Rado aza ny valinteny azony dia navoakany moramora ihany ny karatra misy ny fomba ahazoana mifandray aminy na amin'ny telefona na amin'ny mailaka sady natolony an'i Malala.
- " Tsara tarehy kely izy izany" hoy i Malala. " Hita mihitsy hoe avy any Etazonia ianao. Anoratako ianao fa aza matahotra fa raha tsy mihaona intsony dia any anaty mailaka indray izany miresaka sady ohatran'ny nokapohiny kely ny fen'ilay tovolahy toa diso fanantenana.
- " Manorata rehefa mazoto ianao" hoy i Rado mody tsy rototra toa nankahery tena. " Telo herinandro ihany aho no aty Dago dia miverina any aminay any amin'ny be kintana indray." Hoy izy nony avy eo.
Niantsona ny seranam-piaramanidina teo Ivato ny zotra Air Madagascar nitondra an'i Malala telo mianaka. Nikenokenona aoka izany ireo mpiasa mpandray ny mpandeha vao tonga. Dondona dia dondona ery ny mpandeha hivoaka sady mitazana eo amin'ny varavaran-kely. Toa mikisaka ny fandehan'ny segodran'ny famataran'ora miandry ny hidonan'ilay tohatra eo amin'ny varavaran'ny fiara. Noraisin'i Malala i Cinthya sy ny entana iray nony avy eo ary i Rado kosa no nitantana an'i Toky hamonjy ny lalantsara fivoahana. Hafa mihitsy ny rivotry gasikara raha mitaha tamin'ny rivotra mangatsiaka nilaozana tany Eoropa.
Miramirana aok'izany avokoa ny mpandeha midina ny tohatra hamonjy ny trano fandraisan'entana. Nasain'ilay polisy vavy nandeha teo amin'ny filaharana voalohany avy hatrany i Malala sy Rado miaraka amin'ny ankizy nony avy eo na dia somary taraikiraiky aza ry zareo vao tafiditra tao. Tazan'i Ratrema izay niandry tery ivelan'ny rindrina fitaratra akaikin'ny fisavana entana avy hatrany ny vadiny aman-janany na dia tsy mbola nahita azy aza. Nidobodoboka ny fony fa toa efa ela loatra no niandrasany an'io fotoana io. "Tonga ihany lahy ianareo telo mianaka " hoy izy anakampo. " Misaotra anao aho Andriamanitro o fa nontantanao tamin'iny lalana lavitra iny ny ankohonako" hoy ihany izy toa nivavaka tany anatiny tany sady manara-maso tsara ny toerana alehan'i Malala sy i Toky izay notantaran'i Rado. Taitra kely aloha i Ratrema nahita an'i Rado toa mitantana anjanany. " Mba iza koa ary iny tovolahy iny " hoy i Ratrema somary niady saina. Vetivety ihany anefa izany eritreritra izany dia afaka tao antsainy raha iny hitany fa tamy nanantona ilay rangahy mijoro miaraka amin'ny zandary mpisava entana i Malala narahin'ilay tovolahy mbola nampiketrika ny sainy.
- " Ary tena tsara tarehy mihitsy anie ity vadiko ity" hoy izy mandinika an'i Malala avy any ambony ka hatrany ambany. Tadidiny tampoka tamin'izay koa anefa ny endriky Mme Corine izay toa nampatsiahy tebiteby niserana tao anatiny.
Eritreritra niserana daholo ihany anefa izany fa indro tamy nanatona ny varavaram-be fivoahana ny fisavana i Malala telo mianaka niaraka tamin'i Rado. Hazakazaka ny an'i Ratrema nanatona ny vadiny. Toa adinony ny fisian'ilay tovolahy nitantana an'i Toky fa dia ny hanoroka sy ny hamihina an'i Malala no nahamaika azy.
- " Tonga soa aty amintsika" hoy izy. " Manina anareo mafy mihitsy aho. Tsy nisy olana teny andalana?"
- " Tsy nisy olana kah. " hoy i Malala. " Faly be koa aho aky mahita anao" Efa tsy andriko ery." Niherika tany amin'i Rado i Malala nony avy eo sady namonjy nitodika tany amin'ny vadiny no sady niteny hoe" "Mba mila misaotra kely an'ity tovolahy avy any Etazonia ity ianao Ratrema fa raha tsy nisy azy izahay telo mianaka nanomboka tany Paris an, tena sahirana mihitsy! Rado no anarany." Hoy ihany i Malala sady somary nitopy kely tany amin'ny Rado ny masony miandry fatratra izay ho fihetsiky i Rado manoloana an'i Ratrema.
- " Misaotra betsaka r'ise fa tena sahirana ise, An, an dia mba mila mandalo kely misakafo any antrano izany ise rehefa malalaka sa ahoana?"Tsy i Rado anefa no afaka namaly ny tenin'i Ratrema fa i Malala no avy dia nitsatsaingoka hoe:
- " Telo herinandro fotsiny anie izy hono no eto dia miverina any Etazonia indray e."
- " Eny eh, na dia izany aza ve tsy aleo mba mandroso kely any antrano mba ho fisaorana ny fanampian'ise an'ireto vady amanjanako ireto?"
Toa tsy araky ny nieritreretan'i Rado sy Malala aza mihitsy ny zava niseho ka dia toa nanaiky tsy sazoka i Rado nony farany.
- " Eny re tompoko fa efa nomeko an'i ramatoa vadinao any moa ny fomba ifandraisana amiko ka mba anoraty mailaka aho izany ry Mme Malala amin'ny Alatsinainy dia hampitaiko aminao eo ny programako" Sady nangata-dalana tamin'ny fihetsiny ihany i Rado niherikerika nijery ny rahalahiny izay efa sasa miandry tsy dia lavitra teo tonga nitsena azy.
- " Eny ary" hoy i Malala "fa anoratako ianao fa dia miala sasatra tsara fa lavitra iny lalana iny" sady ohatran'ny nanaovany tsiky toa manohy ny teniny ilay tovolahy.
- " Avelao ho entindry zalahy iretsy ny entana" sady nantsoin'i Ratrema hanatona ireo tovolahy mpanosika entana efa niandry tsy lavitra teo. Asa izay nahazo an'i Ratrema teo fa dia hoy izy tamin'i Malala hoe:
- " F'angaha tsy raharaha be ry Malala ny zava-misy aty fa tena vaky mihitsy ny lohako mieritreritra azy" hoy i Ratrema toa tsy dia tena nisaina loatra ny mety ho akon'ny teny navoakany.
- " Fa misy inona" hoy i Malala sadaikatra sady nanao tsara jery an'ity vadiny.
- " Niantso tany ampiasan'i Hery aho dia nilaza ry zareo tao fa hoe voan'ny lozam-pifamoivoizana hono i leiry andro vitsivitsy lasa izay ary dia mbola any amin'ny hopitaly foana hatramin'izao."
- " Ahoana tsara hoe Ratrema" hoy i Malala saika nitambotsitra nianjera niaraka tamin'i Cinthya eny antrontrony.
- " Eh, eh. Toneo tsara aloha ny fonao fa efa mahatsiaro tena hono izy.
Vao maika anefa nanampitrotraka ny fahatairan'i Malala ny nahenoany an'ilay hoe " efa mahatsiaro tena hono izy".
- " Fa tena saika maty mihitsy izany izy raha izany Ratrema a!" sady namonjy nipetraka teo amin'ilay sisin'arabe ndeha hidina hamonjy ny kianja malalaka fametrahana fiara iny i Malala. Niahotra kely aloha i Ratrema toa nikoropaka tampoka izany nahita ity vadiny ila tsy hahazaka tena hitsangana.
- " Malala a," hoy izy nony avy eo sady somary niodrika nakeo akaikin'i Malala izy. " Ndao aloha hody any antrano dia rehefa tony tsara isika mandeha mijery azy any amin'ny hopitaly".
Izay fampanantenana ny handehanan'izy ireo hijery an'i Hery any amin'ny hopitaly izany no toa nanome tanjaka tampoka an'i Malala nitsangananany niaraka tamin'ny zazakely teny antanany. I Toky moa nandritra izay fotoana izay dia toa tsy dia maharaka loatra hoe inona no mitranga fa ny fitaritana an'i Ratrema hamonjy ny fiara izay efa tsy dia lavitra teo ihany no nasesiny.
Nalohan' i Ratrema ny hafaliam-po hoan'ireo tovolahy nanatitra ny entana tao anaty fiara dia indro izy efa mianaka fa nitodi-doha hiakatra ny renivohitra.
- " Manao ahoana izay zanako vavy ao izay" hoy i Ratrema toa te hanova ny resaka tamin'i Malala nony efa tonitony ity farany izay tsy nahitana teny na dia indray mandeha akory aza nanomboka teo Ivato mandrapiditra an'i Talatamaty.
- " Efa tena miha tsara mihitsy izy. Vao avy nanao fizahana tany amin'ny hopitaly izy ny omalin'ny niaiganay tany. ...Eisy! Hay moa ianao niresaka taminy tamin'ny telefona ary koa..."
Somary nangina kely aloha i Ratrema vao nanohy indray.
- " Ahoana izao no hilazana an'ity vaovao ity amin'i Alexia? Tena tsy mampino ahy le izy eh!.."
- " Ny inona?" hoy i Malala somary taitra indray.
- " I Alexia nilaza fa nanonofy ratsy be momba an'ilay adala lahy iny...dia inona tokoa fa sanatria ny vava hoe tena hitan'i zanako vavy tamin'ny nofy mihitsy ny zavatra nanjo azy taty. Fa tena afaka mifandray an'eritreritra foana ve ny olona na dia mifanalavitra be aza eh? Tena tsy mampino! Tsy haiko hoe ahoana izao no fomba hampitako an'ity vaovao ity amin-janako nefa dia tena miandry ahy mafy izy any izay." Hoy ihany Ratrema sady toa nihivingivina ny lohany mieritreritra izato olana miampy olana tsy maintsy ho vahany.
- " Eny e, tsy voatery hamaly koa anie ianao ry Tojo raha mahasadaikatra anao ilay izy" hoy i Alexia somary nitsiky kely.
- " An, an, kah. Tsy manahirana ahy mihitsy ny mamaly ilay fanontanianao fa tsy nampoiziko fotsiny... Nisy olona niaraka tamiko ihany teo aloha fa efa lasa nody any Dago izy. Herintaona lasa izay. Asa izay nahazo azy fa nifampiantsoantso tamin'ny telefona sy nifanoratra mailaka teo aloha izahay taorinan'ny nandehanany dia nihena tsikelikely ny fifandraisana ary dia tsy heno intsony izy moa izaho koa sahiran-dava. Tsy tena masaka koa ilay izy rehefa dinihiko ankehitriny fa be sakantsakana. Mety aminay koa angamba ny samy mipetraka.... Nisy bandy namako izay nanoratra tamiko vao tsy ela akory izany nilaza hoe hitany efa misy olona miaraka aminy hono any Dago. Vao naheno an'izay moa aho ry Alexia tonga dia niezaka nanamboatra saina tanteraka mihitsy raha ny aminy. "
- " Izany ve? Tsy malahelo azy intsony izany ianao izao?"
- " Misy fotoana ahalahelovako kely azy tsindraindray ihany rehefa misy zava-mitranga mampitamberina ny niarahanay taty saingy efa namboariko ny saiko fa vita tanteraka ny aminay e. Ary ianao be fanontaniana io moa mba ahoana? Misy olona miaraka aminao?" hoy i Tojo somary nangalam-pijery kely tany amin'i Alexia izay toa tena mandinika azy tsara eo amin'ny familiana.
Nisento kely i Alexia izay vao namaly sady toa niova tampoka ilay endriny miramirana feno hafaliana teo.
- "Tsy haiko intsony e. .."
- " Tsy hainao intsony ahoana ry Alexia."
- "Ohatran'ny tsy dia tiako resahina anao ilay izy nefa hitako hoe tsy dia rariny loatra koa anefa raha nisikotra ny momba anao aho dia nefa rehefa izaho no ifoteran'ny fanontaniako dia tsy hamaly...Misy olona miaraka amiko any Dago ary noho izy indrindra no nahatonga ahy nalefa notsaboina aty andafy io..." sady nanomboka namintina fohifohy ny tantaram-pitiavan'izy sy Hery teo i Alexia. Tsy niteny mihitsy i Tojo tamin'io fa sondriana dia sondriana nihaino ity tovovavy toa mamboraka aminy ny adintsainy sy ny alahelony.
- " Mampalahelo ahy izany zavatra andalovanao izany ry Alexia" hoy i Tojo nony vita ny fitantaran'i Alexia.
- " Dia ahoana izany no hataonao, hanafatra azy hakaty amintsika araka ilay resakao sy Profesora ve sa hoe ianao no hiverina hody any Dago?"
- " Tsy haiko mihitsy izay tena hataoko ry Tojo "hoy i Alexia fa raha ianao no amin'ny toerako dia ahoana ny ataonao?"
Nangina samy tsy nisy niteny aloha izy roa nandritra ny fotoana vitsy raha niezaka namadibadika tao antsainy ny zavatra vao henony teo i Tojo no sady niezaka nifantoka tsara amin'ny arabe izorany.
- "Sarotra be aloha ilay izy raha izany" hoy i Tojo nanohy ny resaka " tsy tena fantatro daholo koa izay tena antsipirihan'ny fandehany, fa raha izay voalazanao teo aloha raha tena tinao sady tia anao izany bandy tsara vitana nahazo anao izany dia afaro hakatia izy e." sady nitopy kely tany amin'i Alexia indray ny masony.
- "Tsara vitana ahoana izy no tinao lazaina!" sady ohatran'ny nitsiky sady menatra izany i Alexia.
- " nahazo anao tsara tarehy sady mahafinaritra ohatran'io kah!" hoy i Tojo mody tsy nijery izay mety ho akon'ny teniny teny amin'ny endriky Alexia.
Tsapan'i Alexia fa toa mampiseho fahalianana kely aminy ity tovolahy na dia zavatra tokony hanakana izany aza no resahin'izy ireo... Nony tonga tao seranam-piaramanidin'i CDG...
- " Aleo ianao sy ny entana ajanoko eto" hoy i Tojo tamin'i Alexia sady naka sisiny teo amin'ny toerana fijanona vetivety izy ".. ireo efa miandry ireo ry Malala fa izaho sy Mahefa tsy maintsy mbola hanatitra ny fiara any ambany. Terminal A no halehantsika rehefa avy eo. Any no andraisana ny zotra Air Mad tsinona."
- "Eny ary!" hoy i Alexia tamin'i Tojo sady nitsiky kely izy no narahiny hoe
- "Aza ela any ianareo an."
- "Vetivety fotsiny kah." Hoy i Tojo sady nivoaka hamoaka ireo valizy napetraka teo amin'ny sezan'ny fiarany taoriana izy.
- "Ahoana aky izao no ataoko amin'ireto entako ireto?" hoy i Malala tamin'ity zanany vavy avy nanatona azy.
- "ilay makeo amin'ny fandanjana entana aloha tsy olana satria ianareo mbola eo fa rehefa mandeha miditra any anatiny amin'izay no tena ho sahirana aho hivingitra an'ireto entana entin-tanako ireto. I Cynthia tsy maintsy trotroina moa i Toky koa etsy andaniny tsy maintsy tantanana." Hoy ihany i Malala toa miasa saina mafy.
- " Ahoana tokoa re izany no anaovana azy ry Neny e? " hoy i Alexia sady mierikerika ny manodidina mijery an'ireto olona marobe mifamahofaho mivoaka miditra ny varabaram-be fitaratra teo akaiky teo.
- " Aleo anontaniana i Mahefa sy Tojo rehefa avy eo " hoy ihany i Alexia fa sao dia mba misy olona fantany koa tafara-dalana aminao dia mba izay olona izay no hiangaviana.
- " Izay tokoa angaha no mety azo atao. Enga anie mba hisy izay olona izay fa raha tsy izany dia ho sahirana aho."
Tsy tapitapitr'izay, Iny i Mahefa sy Tojo fa niara-nipoitra avy any namikiviky nanatona ireto mpianaka mbola variana miady hevitra ny amin'izay tokony hatao.
- " Ndao ary!" hoy i Mahefa " fa sao dia variana eto isika" sady nobatainy ny poketra matevina lehibe iray teo akaikin'i Malala. I Tojo kosa namonjy nandray ilay sakosy nisy ny kojakoja mety ilain'ny ankizy eny ampandehanana.
Vao nanomboka niditra ny Terminal A dia tsinjon'izy ireo fa misy tarehy Malagasy maromaro nanao dia maika teo alohan-dry zareo.
Niherikerika i Alexia sady miezaka manaradia ny rehetra ihany. Na dia teo CDG aza moa no niantsonan' ny fiara manidina nitondra azy nankany Frantsa dia tsy nisy zavatra hitany firy raha tsy vao izao indray.
- " Mora mahavery ato izany ry Tojo" hoy izy " Raha tsy mitandrina"
Nitsiky kely fotsiny i Tojo sady namaly hoe:
- "Amin'ny voalohany fotsiny ianao no mahatsapa ohatran'izay fa rehefa mankaty matetika ianao dia mandeha hoazy io sady misy toerana azonao anontaniana foana anie."
Efa nanomboka ny fandraisana entana no tonga ry zareo. Namonjy nilahatra avy hatrany i Malala fa i Mahefa sy Tojo ary i Alexia sy ny ankizy no somary nitokana niresaka kely aloha nfanontany sao dia misy olona fantatr'izy ireo nanodididina teo.
Tovolahy iray tsy mitondra afatsy valizy kely taritina no teo alohan'i Malala. Fantany avy hatrany fa gasy ilay tovolahy ka tsy nisalasala ny anao vavy fa tonga dia nanontany:
- " Azafady anie, io ihany angaha ny entanao?" hoy izy sady nitsikitsiky.
- " Ie," hoy ilay tovolahy namaly tamim-pitsikiana ihany koa " fa ahoana?"
- " tsy izany mantsy fa izaho sy iretsy zanako roa iretsy " sady notondroiny ry I Toky sy Cynthia no handeha ka saika mba hiangavy fotsiny aho raha mba afaka manampy ahy mitondra ny entana sasany ianao rehefa lasa ireo mpanatitra ahy?"
- " Tsy maninona kah" hoy ilay tovolahy tsy naka sarotra sady niverina nitodika tany aloha indray izy.
- " Tena raharaha izy ity ry Malala " hoy i Mahefa " fa tena tsy misy olona fantatray sy Tojo mihitsy amin'ireto olona handeha ireto, tsy ho zakanao samy irery anefa ireto rehetra ireto sady mbola hitondra ny ankizy ihany koa."
- " An, an" hoy i Malala tsy taitra ." Efa noresahiko ity tovolahy eto alohako ity fa afaka manampy ahy izy" sady nokitihiny kely ilay tovolahy hiherika tany aminy sy Mahefa.
- " Hay, tsara kosa izany. Misaotra betsaka r'ise" hoy i Mahefa sady nandray ny tanan'ilay tovolahy izy.
- " Tsy misy fisaorana tompoko" hoy ilay tovolahy namaly. " Rado, no anarako" hoy izy.
- "Profesora Mahefa, ... Mme Malala, zaobaviko" hoy ihany i Mahefa sady nanondro an'i Malala. " Faly mahalala anao. Aiza eto Paris no misy anao?"
- " An, an. Tsy avy eto Paris aho" hoy ilay tovolahy fa mandalo eto fotsiny ny diako. Any Etazonia aho no mipetraka."
- " Wow!" hoy i Mahefa feno tsiky " where in the States do you live?" hoy izy nivadika niteny Anglisy?.
- " In DC" hoy i Rado namaly tsy dia nanampo ny hiteny anglisy amin'ny gasy sendra azy.
- " Ataovy teny gasy ihany ry reto" hoy i Malala somary nanatsafa fa tena tsy misy azoko izany teny tsy fantatrareo izany sady narahiny hehy kely miaro fitsikiana ny teniny.
- "Izay izany" hoy i Mahefa tamin'i Malala telo mianaka nony avy eo "fa dia soava dia ianareo. Aza be ahiahy ny aminay mianaka mijanona aty. Miantsoa raha vao tonga any an."
- " Veloma any amin'i Papa sy Hery any ry Neny a. Aza adino mihitsy ny mandefa vaovao aty amiko ny momba an'i Hery" hoy i Alexia toa nivadika somary nanjombona kely indray ny endriny. I Tojo moa nandritra izay fotoana izay toa tsy nahitana teny firy fa variana izy somary mandinika an'i Malala sy Alexia mifanakalo resaka teo. Toa niserana tampoka tao antsainy indray ilay fotoana niarahany tamin'ny Malala faram-parany omalin'io. "Handeha tokoa moa ity ianao ity" hoy izy an'eritreritra. I Malala nanatona azy sady nanatsotra ny tanany ndeha hanoroka ny takolany havia sy havanana no nanapaka ny eritreriny.
- " Veloma Tojo a" hoy Malala nibitsibitsika" Misaotra betsaka tamin'ny fanampiana rehetra dia aza alefa lavitra ny saina a." sady nopihany maso ankavia i Tojo raha izy handeha hamonjy an'i Mahefa sy Alexia miaraka tamin'ny ankizy teo akaiky teo.
Nahatsiaro alahelo ny tovolahy saingy inona moa no azoko atao hoy izy tany ampony tany. Vadin'olona mandalo ihany iny fa dia mila amboariko ny saiko.
Tsy ela taorian'izay dia iny I Malala misomebiseby mandalo ny fisavana pasipaoro sy ny tapakila fidirana hamonjy ny zotra hoany Madagasikara. Niherika nanao topi-maso indray mandeha avy fotsiny izy telo mianaka mpanatitra dia lasa namonjy ny tohatra midina nakany amin'ny fametrahana fiara.
- " Izaho lesy Tojo tonga dia handeha hoany ampiasana fa mba afaka manatitra an'i Alexia any antrano ve ialahy?"
- " Tsy maninona " hoy i Tojo tsy naka sarotra "sady lalako mody ihany koa tsinona iny."
Tsy feno hipoka toy ny mahazatra ny tao anaty fiara manidina fa betsaka ny seza malalaka na tamin'ny faritra afovoany na tamin'ny sisiny. Fotoana maha vitsy mpandeha koa moa ny fotoana toa izao.
- " Rado a! tsy aleonao ve mifindra mipetraka miaraka aminay telo mianaka eto ampovoany eto toy izay hitoka-monina eo akaikin'io varavaran-kely io " hoy i Malala sady nitsiky tamin'ilay tovolahy nipetraka tsy dia lavitra azy teo.
- " Aleo tokoa ary aho hifindra eo aminareo eo " hoy i Rado fa mbola malalaka tokoa izy izany sady mba miresaka koa isika amin'izay hanalana lalana. Mbola adin'ny folo be izao anie ety ampanidinana ety ihany" sady namaha ny fehikibon'ny seza nipetrahany ilay tovolahy.
- " Ohatran'ny hoe be fiangaviana be anao aho e?" hoy i Malala sady nangalam-pijery tamin'i Rado izy.
- " Tsy olana izany Mme Malala fa raha mbola azoko atao dia ataoko fa raha tsy azoko atao indray kosa ve..."
- " Aza asiana an'izany Mme izany fa antsoy fotsiny aho hoe Malala fa ohatran'ny tsy mahazatra ahy ilay izy."
- " Eny ary e." hoy i Rado tsy naka sarotra sady somary hafahafa tamin'izao fihetsika toa feno fahasahiana be ataon'ity vehivavy vao sambany niresaka taminy ity.
- "Efa ela izany ianao no nipetraka any Etazonia?" hoy i Malala nampidi-dresaka.
- " Efa ho sivy taona izay" hoy i Rado namaly.
- " Zany an! Efa tena tsy hody any Dago intsony izany ianao raha azoko" hoy i Malala nanohy sady nametraka tsara an'i Toky teo amin'ny sezany. I Cynthia moa tamin'io efa resin-tory sahady ka tsy dia nanahiran azy firy loatra.
- " Mbola hody ihany aho fa aleo mba mitady kely sady manangonangona aloha vao mody sa ahoana?" hoy i Rado sady nitopy tany amin'ny mason'i Malala ny fijeriny.
- " Marina aloha izany . Ny anao no mety. Mba manonofinofy ny hahita an'izao Etazonia izao aho, asa na ho tonga any ihany indray andro any!'
- " Tonga any foana ianao rehefa tena maniry ny hoany" hoy i Rado.
- " Marina izany" hoy i Malala " Ho avy hamangy anao any aho ..." sady toran'ny hehy izy. Tsy niteny ilay tovolahy fa ny tarehiny no nahatokatony sady narahiny tsiky.
Nony teny ampanidinana ny fiara...
Toa tsy andrin'i Malala ery izay ahatongavana any Madagasikara. Betsaka ny zavatra nifamahofaho tao antsainy ny amin'izay ho hitany any. Toa tiany hadinoina daholo anefa izany rehetra izany aloha fa mila fitoniana ny sainy. Ndeha mba hisotro divay kely aho androany hoy izy amin'izay tonga dia mahita tory rehefa avy misakafo. Nony nandalo tokoa ilay tovovavy mpikarakara eny ambony fiara manidina dia tsy nisalasala i Malala nangataka ny mba hanomezana azy divay kely miaraka amin'ny sakafony. Maivamaivana sady toa sambatsambatra izany no nahatsapany ny tenany nony vita ny sakafo. Toa adinony avokoa ny sorisorin-tsainy rehetra sy ny ahiahiny ny amin'izay miandry azy any Madagasikara. Nahatsiaro te hatory izy nony avy eo ka dia nesoriny aloha ny kirarony ary novahany ny fehikibon'ny seza nipetrahany mba ahafahany mahazo aina tsara. Tsy naharitra anefa izy nony avy eo fa niangavy tamin'ny Rado hoe:
- " Mba afaka miankina aminao ve aho raha hatory?"
- " Tsy maninona kah" hoy i Rado sady tonga dia nosarihiny moramora hanatona azy akaikaiky i Malala no nampandriany hiondana teo amin'ny feny. Nahakasika tsy nahy ny tarehan'i Malala anefa ny tanany tamin'izay ka taitra mafy izy ny amin''ny halefahan'ny hodi-tarehan'ity ramatoa miodana eo aminy.
- " Mba malefaka hoditra koa ity Malala ity izany " hoy izy aneritreritra sady toa nifoha tampoka ny filana tany anatiny tany. " Tena ohatran'ireny hodi-jaza kely ireny mihitsy ny halefahany" . Somary efa maizimaizina moa tao anaty fiara tamin'io araka ny fanao isaky ny vita fisakafo eny ampandehanana eny mba ahafahan'ny mpandeha matory ka dia ohatran'ny vao maika naka fanahy ity tovolahy. Tsy naharitra intsony izy nony farany fa dia nanomboka nolalaoviny moramora ny volon'i Malala. Tsy nanohitra na dia kely akory aza anefa ity farany, asa na nohon'ny vokatry ny alikaola kely nosotroiny teo na dia izy mihitsy no nahazo fahafinaretana tamin'izay natao azy fa dia navelany hanohy ny safosafony teo i Rado. Nihitatra ny filana tao amin'ilay tovolahy ka dia nafindrany teo amin'ny takolaky Malala indray ny tanany rehefa avy eo sady nandramany nampandalovina teo amin'ilay molotra somary matevina malefaka feno loko mena teo ny rantsantanany. Hakory ny hagagan'i Rado fa toa nohejehan'i Malala notsetsafina ilay rantsan-tanany anakiray mbola taraikiraiky teo. Taitra nangoritsina i Rado tany anatiny tany ary dia nanomboka nivonto niaraka tamin'ny izay ihany koa ny filahiany izay niondanan'i Malala. Nihatery hatrany ny pataloha nifono ny filahiany. Tsy azony ny ainy ka dia niezaka naka toerana tsara araka izay azony atao izy sady nijery ny manodidina izay toa efa samy mitady torimaso mirakotra lamba avokoa. Henon'i Malala tsara ny fivontosana niondanan'ny hatony. Na dia vao omaly aza moa izy no nomen'i Tojo ilay fahafinaretana tao amin'ny efitranon'ny Alexia dia tsapany fa mitady mafy indray ny vatany manoloana ity tovolahy bikana sady nofosana teo anilany. Taitra ny vatany. Toa te hanao adalana izany ny fahatsapany ny tenany. Norakofany lamba tsara ny tenany iray manontolo dia noraisiny moramora ny tanan'i Rado nony avy eo hamaha ny bokotra akanjony ambony niafina tao anaty lamba. Takatry Rado avy hatrany ny tian'ity vehivavy hatao ka dia tsy nisalasala koa izy fa dia nanatanteraka avy hatrany. Natsofoky Rado moramora teo amin'ny nonon'i Malala amin'izay ny tanany ankavia nony avy eo. Fafiny tsy misy ohatran'izany no tsapany nanenika ny vantany iray manontolo fa toa lafatra loatra ny fahatsapany ireo nono mivohitra be toa voasary voaharony tao. Henony tsara fa henjana sady somary matevintevina aoka izany ireo loha nonon'i Malala. Mbola mitana mihitsy ity madama ity izany hoy izy tany antsainy tany sady notohizany hatrany ny safosafo sy ny fanatsongotsongoina malefaka ireo lohanono anakiroa. Nony kelikely dia nahiratry Malala moramora ny masony sady nangalam-pijery tany amin'ity tovolahy vao fantany ora vitsivitsy monja izy. Tsy niteny i Rado fa tsiky koa no navaliny azy tao anatin'ny hazavana mitsilopilopy tao. Tsapany fa samy nanenika azy roa ny filana te hanakatra ny lafatra kokoa...
Nony afaka kelikely dia indro i Mahefa sy Alexia mianaka niakatra ny tohatra niditry ny trano.
- " Misaotra betsaka ry Dada nitondra ahy tany amin'ny hopitaly androany sady nitondra any tany ampiasanao. Nahafinaritra iny fiarahantsika mianaka androany iny an." Nitsiky kely aloha i Mahefa sady nitodika tany amin-janany vao namaly. Ohatran'ny tsy mampino azy ny mieritreritra ny fiovam-piainany tampoka tao. Mananjanaka vavy lehibe sady tsara tarehy no feno fahendrena moa ity izaho hoy ihany izy aneritreritra. Dia tena tsy misy ivohasana amin'ny Vololona reniny mihitsy ity izy.
- " Tsy misy fisaorana anaka fa dia finaritra toa anao koa aho." Sady nanindry ny bokotra fanairana teo ambaravarana izy hamohan'i Malala ny trano avy any anatiny.
Poa toa izay dia io i Malala mitsikitsiky namoha azy mianaka.
- " Vetivety kosa dia tonga ianareo, tsy nisy tohana be ve teny andalana nody?"
- " An, an, tsy dia naninona kah" hoy i Mahefa " ...dieny mbola tsaroako aloha... mila miantso an'i Ratrema isika rehefa avy eo fa niantso ahy mantsy izy teo fa te hanontany mikasika ny dianareo telo mianaka rahampitso maraina hono... Ianao moa no tena tadiaviny." Sady nanala ny palitao nisalorany ihany i Mahefa moa i Alexia nandeha nametraka ny poketrany sy ny sakafo novidian'izy mianaka teo ambony latabatra.
- " Ahoana vita daholo ve ny nataonareo niaraka tamin'i Tojo anikeo?" hoy i Mahefa nitopy maso tany amin'i Malala nony avy eo. Ohatran'ny mahana kely izany ny anao vavy naheno ny anaran'i Tojo nitselatra tampoka tao antsofiny.
- " iiiieh! Vita daholo kah. Tsy nisy olana mihitsy. Efa voaomako aza ny valizinay telo mianaka koa."
- " Tsara izany! Ary maika ny handeha hody mihitsy anie i Malala izany eh!" hoy i Mahefa toa nanatsafa. Ohatran'ny nangarika kely izay i Malala no sady namaly hoe:
- " Efa vita kosa izay tokony hataoko taty sady efa todiko aty amin'ny rainy ny zanany tsinona ka tsy aleo amin'izay ve aho mody e." Nangalam-pijery tany amin'i Alexia mbola nihodin-kodina namoaka ny sakafo avy ao anaty harona sachet nitondrany azy aloha i Mahefa vao namaly. I Alexia moa amin'io toa nisary tsy naheno ny resaka nifanakalozan'izy roa nefa nitsiky ihany namaly ny tompi-maso nataon-drainy azy.
- " Misaotra betsaka Malala tamin'izay vitanao, ianareo mivady mantsy eh tamiko sy Alexia. Fahagagana ho ahy izao zavatra iainako izao ary fantatro fa tsy hahaonitra velively ny zava-bitanareo tamin'ny fanabeazana an'i Alexia mihitsy aho. Zanaka iaraha manana ny antsika io e...fa aza manahy ianareo fa ataoko izay hahatafita azy amin'ny fiainana. Mba adidiko indray izao... oay! Aza adino tokoa fa tena mila miantso an'i Ratrema isika izao fa efa sasa-miandry izy izay." Sady namonjy ny telefona nihantona teo amin'ny rindrina i Mahefa.
- " Allo! Ngahy Ratrema?"
- " Allo! Izy indrindra ity e! Profesora Mahefa?"
- " Izaho ihany ity Ratrema fa efa aty antrano izahay mianaka izao sady efa io koa i Malala fa aleo aloha ianao homeko azy. " sady nomeny an'i Malala efa nihazakazaka nanatona akaiky teo ilay telefona.
- " Allo, .... chéri, Ela be akia nareo izany tsy heno mihitsy 'zahay anefa ato tena efa tena tsy andrinay mihitsy ny hodiana fa manina be anao." Sady ohatran'ny niagotingoty izay ny feon'i Malala. Vao naheno an'izay fehezan-teny voalohany izay moa i Mahefa dia naleony aloha niala tanteraka an'ilay efitrano. I Alexia moa tsy niala teo fa dia nanohy nanomana ny latabatra hisakafoanan'izy ireo.
- " Rahampitso izahay no miainga" hoy i Malala "fa tongava eny Ivato ianao mitsena anay telo mianaka ... andraso kely aloha aza miala fa haka ny billet- ko vetivety fotsiny aho hanomezako anao ny ora ahatongavanay any." Poa toy izay i Malala dia efa tafaverina sady nanome an'i Ratrema ny ora ahatongavany any Madagasikara.
- " Tsy andriko mihitsy ny ahatongavanareo telo mianaka fa tena mila anareo mihitsy aho. Manina mafy an'i Toky sy Cynthia koa aho. Tsy efa fetsifetsy ratsy ery izay le nedala lahy iny. Manao ahoana i Cynthia ao?"
- " Efa matory ry zareo fa reraky ny fivezivezena nandeha naka ny billet sy niantsena anikeo angamba. Salama tsara ry zareo."
- " Tsara izany" hoy i Ratrema. " Fa izao hoy aho." Sady niahotra kely Ratrema aloha. Ahoana marina no tena nahatonga an'i Alexia niangavy ahy hitady an'i Hery e? Efa noresahiny anao ve? "
- " An, an " hoy i Malala somary niova feo tampoka. " Fa ahoana?"
- " Niresaka mantsy izahay mianaka teo tamin-dry zareo mbola teny andalana hody io dia niangavy ahy izy mba hitady an'i Hery ". Niontana ny fon'i Malala naheno ny anaran'i Hery toa niverimberina tao anatin'ny zava-boalazan'i Ratrema. " Hery" hoy izy aneritreritra. " Aiza ianao? "
- "Dia ahoana ny navalinao azy" hoy i Malala mody tsy rototra nony avy eo sady liana mafy ny amin'izay ho valintenin'i Ratrema manaraka. I Alexia moa amin'io fotoana io tsy maheno izay voalazan'i Ratrema fa izay lazain'i Malala ihany no henony.
- " Nanaiky tsy fidiny aho ry Malala fa tsy te handratra ny fonjanako izay mbola marefo dia marefo iny aho. "
- " Eny eh, karakarao izany ny amin'izay dia ho hitantsika eo indray izay atao rehefa tonga any aho."
- " Izay aloha fa omeo kely an'i Profesora aho aloha hisaorako azy" sady narahiny hoe " ...tongava haingana ianao malala fa tena mila anao mihitsy ny tenako iray manontolo ah." Nitsiky kely fotsiny i Malala naheno ny tenin'ny Ratrema farany teo:
- " Kely sisa akia chéri a!" sady niantso an'i Alexia izy mba hiantso an'i Mahefa fa te hiresaka aminy hono hoe i Ratrema. Lasa nandeha nivadika tao anefitra ilany i Alexia dia niverina avy eo niteny tamin'i Malala fa efa miresaka ao ry zareo. Napetraky Malala amin'izay ny telefona teny antanany dia namonjy nakeo amin'i latabatra efa nomanin'i Alexia hisakafoanana izy.
- " Nanao ahoana aky ny fandehan'ny fizahana nataon-dry tany androany?" hoy i Malala nanontany ampitsikiana toa miezaka manala soritra eny amin'ny tarehany ny havizanana taorian'ilay fanaranampon'ny filany niarahany tamin'i Tojo ora vitsivitsy talohan'io.
- " An, an. Tsy misy blema kah. Mandeha tsara daholo ny zavatra rehetra. Efa mihatsara mihitsy hono aho ary ho afaka ny hiditra hianatra amin'izay atsy ho atsy. Mila mandalo any indray fotsiny aho afaka enimbolana."
- " Tsara izany akia. Indry ve izany izao tena hoe tapa-kevitra ny hijanona tanteraka aty mihitsy sa hoe mbola mety hody any Madagasikara ihany?"
Somary nangina kely aloha i Alexia vao namaly.
- " Eo mihitsy izao no tena mbola mahavaka ny saiko na dia nisy fotoana aza tena efa nanapahako hevitra hoe tena hijanona hianatra aty amin'i Dada!"
- " Fa ahoana indray " hoy i Malala sady toa nikentrona ny tarehiny.
- " Ohatran'ny lasa tena malahelo be an'i Hery izany aho tao ho ao na dia nisy fotoana aza tena efa tsy nieritreretako azy intsony. Tamin'ny alina izany aza moa aho dia tena nanonofy ratsy ny momba azy mihitsy....ohatran'ny hoe maty izany hono izy tamin'ny fahitako azy tao anaty nofiko tao. Inona koa angaha no mety ho dikan'izany nofiko izany e. Tsy aritro intsony moa dia tamin'izaho niresaka tamin'i Papa teo dia niangaviako izy mba hitady an'i Hery fa mijaly loatra ny saiko."
Nisento tokana aloha i Malala vao nanomboka niteny.
- " Efa nisy nitantara tamin-dry moa ny zava nitranga tamin'izahay hiondrana teny Ivato hitondra an-dry aty andafy?"
- " An, an, fa nisy inona?" hoy i Alexia namonjy nipetraka mihitsy tamin'iray tamin'ireo seza teo anoloany.
_ " Tantara lava ilay izy sady tsy fantatro hoe tokony ho lazaiko amin-ndry ve sa ahoana fa tena gidragidra anie no niseho teo Ivato teo ry Alexia e. Mbola tsy nahita an'i Hery nila sotasota imasom-bahoaka ohatran'izany aho. Ohatran'ny mamo rahateo koa moa ny fahitako azy. Ny ahy dia izay hanavotana ny an-dry no tena masaka tao antsaiko ka nialako lavitra daholo izay mbola azo nialana rehetra fa i Papanareo no nifanazava taminy tao. Raha ny filazan'i Ratrema tamiko taty aoriana aloha dia hoe notadiaviny tsy havela handeha hono indry fa azy. Taorianan'izay dia samy tsy naheno izay vaovao momba azy intsony izahay."
Gina tsy nahateny sady niondrika nitehin-kiho teo amin'ny latabatra nanoloana azy i Alexia. Toa nalainy sary antsaina ny zava-niseho vao avy notantarain 'i Malala taminy teo. Niserana tampoka tao antsainy ihany koa ny antony nahatonga azy niharan'iny lozam-piara kodia iny. Tsy niteny aloha izy elalela fa ny tanany no nampiakariny moramora hamafa ny ranomaso nikoriana moramora tamin'ny takolany anakiroa.
- " Aza fady akia Alexia fa tsy ny hampalahelo an-dry mihitsy no antony hilazako an'izany fa mba tiako ho fantatry indry daholo ny zava niseho mba ahafahan-dry maka fanapahan-kevitra voalanjalanja tsara."
- " Misaotra anao aloha ry Neny tsy nanafina tamiko. Tena tsy haiko mihitsy hoe ahoana e. Mijaly be mihitsy ny foko sy ny saiko fa tena mifamahofaho be amiko ny aminay sy Hery. Niezaka nanadino azy tanteraka mihitsy aho rehefa tena nandinika ny adalany sy ny fampijaliany ahy avy etsy sy eroa saingy rehefa tena manontany ny tenako aho dia tsapako fa tena tia tanteraka azy aho ary tsy ho sambatra mihitsy raha tsy izy no vadiko."
- " Eny e! azoko ny tiandry tenenina fa izao. Mbola mandalo fiovana be dia be fotsiny ny fiainandry izao dia izay no mahatonga an-dry mihevitra toa izany fa minoa ahy marimarina anie indry fa rehefa miditra mianatra eo ianareo sady miha zatra ny fiainana aty andafy aty indry dia tsy ho tadidin-dry firy intsony ny aminy e."
- " An, an, an. Tsy haiko aloha izay ho avy any fa ny zavatra tsapako amin'izao fotoana izao no amborako aminao. Mbola tena tia be azy mihitsy aho ary izaho sy Dada ary anikeo teny andalana ndeha hody io niresaka hoe ..."
- "niresaka hoe ahoana" hoy i Malala nitsatsaigoka nanapaka ny tenin'ity zanany vavy.
- "...i dada no nampiditra an'io hevitra io fa tsy izaho an. Hoe maninona moa raha afarana makaty France koa i Hery"
- " Zany ve no nolazainy" hoy i Malala sady ohatran'ny niaka maso nijery ny valin-drihan'ny efitrano niresahan'izy mianaka izy. Nalain'i Malala sary antsaina haingana ny mety ho fizotran'ny fiainan'i Hery sy ny fiainany ilaozan'i Hery hoany andafy. " Dia tsy hahita an'i Hery intsony izany ve aho? Dia ahoana ny zanany aty amiko? ..."
- " Ahoana ny eritreritry i Neny amin'izay soson-kevitry Dada izay" hoy i Alexia nanapaka ny tohivankan-kevitra nifanesisesy tao antsain'i Malala tampoka teo.
- " An, an, an. Raha mety ve moa i Ratrema raindry izaho indray ve no hisakana an'izany eo. Ny soa hoandry ve ry Alexia dia ho sakanako." Toa tsy nampoizin'i Alexia iny valin-tenin'i Malala iny. Hatramin'izay tokoa mantsy dia tsapany ho nanalokakoka ny fifankatiavan'izy sy Hery foana ny fisian'ny Malala manodidina an'izy roa eo. Raha tonga aty andafy tokoa angamba i Hery hoy izy dia mety mba milamindamina amin'izay ny fiainako fa tsy misy an'i Neny hanalokaloka ahy eo foana intsony.
-" Faly aho izany rehefa tsy manisy olana amin'ilay izy i Neny fa i Papa indray haiko ny miresaka aminy." Sady toa nihiratra tampoka ilay tarehiny nanjombona nolalovan-dranomaso teo.
Fotoana vitsy taorinan'io dia indro niditra ny efitrano nisy azy mianaka i Mahefa.
- " Mampamangy hono ianao Alexia hoy i Ratrema fa miantso anao eo izy raha vao malalala amin'ity herinandro ity.
- "Hay, misaotra dada" hoy i Alexia nitsiky sady nanokatra ny seza teo akaikikiny hipetrahan'i Mahefa. " Efa noresahiko an'i Neny ry Dada ilay resantsika mianaka teny andalana hoe hanafarana an'i Hery hakaty France a. D'accord hono izy fa i Papa izany sisa no mila resena lahatra."
- " Izay tokoa no eritreritro ry Malala " hoy i Mahefa nagalam-pijery tany amin'i Malala toa miezaka mamaky izay ankon'ny teniny eny amin'ny endriky farany.
- " Efa noteneniko an'i Alexia teo ny hevitro Mahefa fa dia resaho i Ratrema hikarakara an'izay fa ohatran'ny ho sarotsarotra amiko ihany aloha eh."
- " Efa noresahiko i Papa hitady an'i Hery any ampiasana rahampitso ry Neny a." hoy i Alexia. Hiantso ahy eo izy raha vao mahazo vaovao. Somary taitra kely sady niontana ny fon'i Malala naka sary antsaina ny mety ho fihaonana voalohany indray eo amin'ny Hery sy Ratrema taorianan'ireny fisehoan-javatra teny Ivato farany ireny.
" Hay, " hoy fotsiny i Malala toa tsy naka sarotra sady nanomboka nandray ny sotro rovitra sy ny antsy nanoloana azy.
- " Dieny mbola tsaroako tokoa aloha ry Mahefa dia nanafatra i Tojo hoe mba te hanatitra anay telo mianaka miaraka aminareo hono izy rahampitso ka mba antsoy izao hariva izao ihany raha ohatra ka tsy misy olana hanomanany ny fandaharam-potoanany rahampitso."
Somary nangina kely aloha ny rehetra sady nifantoka tany amin'i Mahefa daholo ny mason'izy mianaka niandry izay ho valin-teniny.
- " An, an, an. Inona moa ny olana amin'izany fa vao maika aza mba misy manampy antsika amin'ny fitondrana entana koa... Lasa tsara resaka aminao mihitsy anie iny Tojo iny ry Malala eh!" sady somary nitsiky kely toa manatsafa izany i Mahefa.
- " Tsara resaka amin'ny ahoana aloha izany e." hoy i Malala mody niseho ho matotra. " Ohatran'ny somary hafahafa ihany aloha i nedala tamin'ny voalohany fa lasa niresaka be mihitsy izy nony avy eo sady tsapako hoe tena tsara fanahy sady tena tsotra mihitsy izy. Olona mitovitovy toetra amin'i Tojo ireny no tena tsara miaraka amin-dry ry Alexia?" hoy ihany i Malala nanohy sady nijery izay mety ho fihetsiky ity zanany vavy.
- " Zany ve?" hoy i Alexia toa tsy rototra akory. " Ohatran'ny mbola zaza be izany anefa ny fahitako azy. Ny ahy lehilahy somary efa matomatotra ireny no tena mahasarika ahy."
- " Ohatran'i Hery ve?" hoy i Malala toa tsy namela an'i Alexia saika mbola hanohy ny teniny.
- " Ohatraohatrany fa hendry kokoa, tsy dia tia vehivavy " sady ohatran'ny toran'ny hehy kely izany izy.
- " Aleo fa antsoiko izany i Tojo rehefa avy eo " hoy i Mahefa nanapaka ny resak'izy mianaka toa milaza hoe ajanony any izany resaka izany.
Ny ampitso ...
Tonga tao antranon'i Mahefa araka ny fotoana nifanomezana i Tojo. I Alexia no nanao dia maika namonjy namoha ny varavarana raha vao nanenony ny kiririoka fanairana fa misy vahiny ao ambaravarana. Somary taitra kely i Tojo nahita an'ity tovovavy bikana sady tsara tarehy ary feno tsiky niarahaba sady nampandroso azy teo ambaravarana.
- " Mandroso Tojo a. Efa ianao sisa no andrasana dia lasa isika? Mitady hanao fotoan-gasy an! Efa aty andafy anie isika izao eh" hoy ihany i Alexia.
Toa tsy tsikaritry Tojo akory ny tanany ankavanana nandeha nihaotraotra ny lohany toa lasa nangidihidy tampoka nanoloana izato anihany nitsenan'i Alexia azy. Sambany tokoa mantsy vao tena niresaka mivantana toa izao izy roa taorinan'ilay nitondran'i Tojo an'i Alexia nitsangatsangana indray mandeha iry.
- " Voatery tsy maintsy nivily lalana aho fa misy " accident" amin'ilay lalana fandehanko haingana mankaty fa dia ilana tsiny re tompoko fa dia nampiandry ela anareo rehetra sady niditra ny varavarana nosokafan'i Alexia hidanadana ihany izy.
- " Vazivaziko izany" hoy Alexia fa mbola tsy vonona akory ary ry zareo. Tonga dia mipetrapetraha ery amin'ny salon ery aloha fa inona no entiko ho sotroinao? Efa nisakafo maraina?" toa fanina tsy nahita havaly ny tovolahy naheno an'izato hanihany, iraka, fanontaniana nifanesisesy niantefa teny aminy. Nizotra moramora namonjy ny seza lava teo amin'ny salon izy aloha sady nieritreritra ihany hoe ary tena niova be tampoka tato ity jo ity an.
- " Jus d'orange omena ahy Tompoko raha misy ao?"
- " Hatramin'ny oviana indray ary ity tompoko, tompoko ity ry Tojo. Izaho anie tsy ..."
- " Azafady fa ohatran'ny varimbariana aho fa efa zatra be an'io tompoko io aho raha vao miditra ato amin'ity trano ity mantsy" sady nitsiky kely izy.
Tsy ela taorian'izay dia nipoitra avy any Mahefa.
- " Hay efa tonga ato ise? Efa kely sisa dia ho vonona ry zareo kah. Rehefa vita ny jus an'ise dia tonga dia ampidiro ao anaty fiaran'ise ny entana. Aleo i Malala sy izy mianadahy hiaraka amiko dia ise sy Alexia izany no miaraka rehefa avy eo."
Ohatran'ny nisy herin'aratra nikoriana tampoka nanenika ny vatan'i Tojo teo ampihainoana an'i Mahefa. " Izaho sy Alexia no miaraka. Hipetraka eo akaikiko indray ve izany ity jo ity. Gaigy be izy izany" hoy ihany izy niteny irery sady nanatelina ny faramparany tamin'ilay ranom-boasary natolotry Alexia azy teo. Lasa nivadika tao anefitra izy naka ireo valizy nisy ny entan'i Malala sy ny ankizy dia nitondra azy tao anaty fiarany. Lehibe loatra anefa ilay valizin'i Malala ka naleon'i Tojo napetraka teo ambonin'ny seza aoriana fotsiny.
Iny Tojo ndeha hanidy ny varavarana aoriana ny fiarany iny no nivoaka avy any I Malala nitrotro an'i Cynthia. Nanao akanjo ambony sy ambany miloko fotsy vita amin'irony lamba cotton malefaka irony. Indray mipi-maso no nandinihan'i Tojo an'i Malala avy any antampon-dohany ka hatrany ampaladihany. Tsy tsinjony fa tsikaritry Malala tsara anefa ny fihetsiny. Efa i Malala eo akaikiny eo niteny moramora hoe " Mandinindinika an..." taminy vao taitry izy sady nitsiky.
- " An, an, an...mankafy mijery anao faraparany fotsiny aho kah. Diso ve aho? ... nataoko eto ambony seza ato aoriana ny valizinao fa tena tsy tafatsofoka tao amin'ny fasiana entana."
Raha mbola iny nifanatsafa teo iny i Tojo sy Malala no indro i Alexia niteny hoe tamin'ny Malala hoe:
- " Izaho sy Tojo" hono no miaraka hoy Dada fa ianao miaraka aminy."
" Efa fantatro" hoy i Malala "fa mba te hiarahaba an'i Tojo fotsiny aho." Tsy nisalasala i Alexia fa tonga dia namonjy nipetraka teo akaikin'i Tojo teo amin'ny familiana. Tera-tsemboka tampoka ny tovolahy nahita izato hakanton'i Alexia eo anilany. Toa manonofy tampoka teo izy. " Ohatran'ny mety hiady amin'ny pieces ko ihany ity jo ity izany fa ny fomba hampiresahana azy izao no gaigy" hoy i Tojo miady saina mafy sady toa nanadino avy hatrany ny eritreriny mbola voasarika tamin'ny Malala minitra vitsy teo aloha.
Niroso nilahatra kely teo amin'ny toerana niantsonan'i Tojo i Mahefa dia nifampijery izy roalahy mianaka sady toa nanao baiko moana azy i Mahefa hoe manarahy ahy fotsiny.
Dia indro fa niainga izy ireo hamonjy an'i CDG hanatitra an'i Malala telo mianaka hitodi-doha hoany Madagasikara.
Tsy niteny mihitsy i Tojo fa ny lalana sy ny fiara mirimorimo teo alohany no nobanjininy tsara. Tsy naharitra i Alexia dia izy no namaky ny fahanginana.
- " Inona ny vaovao Tojo a! mandeha tsara ny fianarana? Izay indray isika sy ianao vao tafara-dalana an. Ilay izaho netinao nitsangatsana iry izao no tadidiko farany. Tezitezitra tamin'i Neny aho tamin'iny fa nisinda mihitsy ny hatezerako nony tafaverina tao antrano aho nony hariva"
- "zany an." Hoy i Tojo nitsiky. " Aza mba mora tezitezitra izany ianao Alexia fa mora mampiketrona io tarehinao mahafatifaty io an'ie izany e."
- " Ahoana tsara hoe ry Tojo?" hoy i Alexia toa tsy nino ny zavatra henony teo.
- " an, an, an. Mora mampiketrona tarehy hoy aho ny hatezerana."
- " Eny e. Mety misy mahamarina an'izany ihany aloha fa indraindray anefa ianao tena tezitra ihany rehefa tena tsy zakanao intsony ny zava miseho. Fa hono hoy aho, efa manana sipa angaha i Tojo?"
Toa tsy nampino an'i Tojo ny fanontaniana henony.
- " Ary mivantambatana be anie ianao izany ry Alexia e?"
- " mivatambatana ahoana ary? Misy mahadiso angaha ny manontany zavatra ohatran'izany? ... Manontany tena fotsiny aho izany izao hoe be gasy be hifanena amintsika ao CDG, dia raha ohatra hoe efa manana sipa ianao dia misy mahita antsika roa irery mandeha rehefa tonga any dia mety hisy hitatitra any aminy hoe hitako niaraka tamin'izay sipa izay i Tojo dia ahoana ny hanazavanao azy.
- " Ka isika anie tsy hoe mandeha irery fa miaraka amin-dry Malala sy Mahefa ka tsy hitako hoe inona no mety ho olana amin'izany e." hoy i Tojo.
- " Eny e. valinao aloha ny fanontaniako e?" hoy ihany i Alexia sady somary nitodika kely tany amin'i Tojo mihitsy izy. Ity farany indray moa amin'io toa tsy sahy mijery azy fa mibanjina tsara ny arabe eo anoloany.
- " ah, ah,...." hoy i Tojo sahirana mafy mifidy izay teny hamaliany ity tovovavy tsara tarehy miandry fatratra ny valin-teniny.